Mahafantatra ny zoron'i Dubrovnik, ny voahangin'ny Adriatika | Vaovao momba ny dia
Maria | | Dubrovnik, Inona no ho hita
Dubrovnik dia iray amin'ireo tanàna lamaody any Eropa. Ny hakanton'ity tanàna amorontsiraka Dalmatian ity dia niampita sisintany ary tsy miafina amin'ny olona intsony. Angamba izany no antony, tato anatin'ny taona vitsivitsy, nitombo be ny fizahan-tany, hany ka misy ireo miresaka momba ny hamaroan'ny olona.
Na izany aza, ny ezaka mankany amin'ny toerana feno mpizahatany amin'ny metatra toradroa vitsivitsy dia mendrika izany rehefa miresaka momba ity tanànan'ny Lova Iraisam-pirenena ity ao anaty enclave tokana isika.
Ho fanampin'izany, any Dubrovnik dia tsy hahita morontsiraka vato mahafinaritra miaraka amina firavaka manokana ihany isika fa tolotra ara-kolontsaina tsy manam-paharoa ho an'ireo tia kanto sy tantara.
1 Fiandohan'ny Dubrovnik
2 Fitsidihana Dubrovnik
3 Karatra Dubrovnik
4 Dubrovnik Beaches
5 Ahoana no ahatongavana any Dubrovnik?
Ny anarany dia midika hoe ala oaka ary nomen'ny hazo marobe an'io karazana io izay nisy teo amin'ilay faritra teo aloha. Taloha dia fantatra koa amin'ny hoe Ragusa ary niaina ny fotoan'ny famirapiratany teo amin'ny 1272 fony izy nanjakan'ny aristokrasia. ary ny varotra volafotsy natsofoka tamin'ny volamena (glama) dia nitondra tombony be ho azy teto amin'ny kaontinanta.
Ny fihenan'ny Dubrovnik dia tonga tamin'ny 1667 rehefa nisy horohoron-tany namely ny tanàna. Taonjato maro taty aoriana dia niaritra ny tsy fahampian'ny ady izy io rehefa nanapoaka saika ny tanàna iray manontolo ny baomba 90 an'arivony. Raha ny marina dia mbola tsy sitrana ny ratra azy fa ny asa atao mba hamerenana azy amin'ny famirapiratany taloha. Amin'izany fomba izany, ny ankamaroan'ny tranony sy ny tranony dia fananganana vao haingana.
Ny hevitra tsara hanombohana hahafantarana ilay tanàna dia ny fandehanana mamaky ny mandany lava, izay azo alefa amin'ny fidirana iray any avaratry ny tanàna, akaikin'ny fiangonan'i St. Spasa.
Ireo rindrina dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-1.940 ary manome fomba fijery mahavariana amin'ny tapakila mora vidy. Raha atotaly dia manana lalana 25 16 metatra izy ireo ary XNUMX metatra ny haavony. Ho fanampin'izay, manana tilikambo XNUMX izy ireo izay niaro azy ireo tamin'ny fanafihan'ny jiolahin-tsambo. Naverina tamin'ny laoniny tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo izy ireo.
Raha vantany vao vita ny fitsangatsanganana amin'ny rindrin'ny Dubrovnik, tonga ny fotoana hitsidihana ny tanàna taloha. Azo idirana amin'ny alàlan'ny Puerta de Pile izy io, izay mampiseho ilay tolotra am-baravarankely taloha izay niaro ny tanàna. Amin'ny maha-te hahafanta-javatra azy, ny endriny ivelany dia amin'ny fomba Renaissance ary ny ao anatiny dia Gothic.
Rehefa mandalo azy io ianao dia miditra ao amin'ny Stari Grad, ilay 'tanàna taloha'. Avy eo dia hamakivaky ny arabe malaza any Ragusa taloha isika: ny Placa na Stradun. Tamin'ny taonjato faha-XNUMX ity lakandrano ity dia lakandrano nampisaraka ny faritra roa amin'ny tanàna saingy nofenoina izy io hampitambatra ny faritany. Ny lampivato marbra mampiavaka azy no mampiavaka azy indrindra.
Ny lapan'ny fomba bararo dia mitarika antsika mankany amin'ny Plaza Luza. Eo akaiky eo ny Lapan'i Sponza sy ny Fiangonan'i San Blas izay namboarina araka ny maodelin'i San Mauricio any Venise.
Ny katedraly an'ny Ass Assètion Baroque, miaraka amin'ny Rector's Palace, dia mendrika hitsidika ihany koa. Ary mazava ho azy, mankanesa any amin'ny Loharano Onofrio malaza sy goavambe izay tsy misy afa-tsy ny saron-tava vato, izay ivoahan'ny fisotroana sy rano madio.
Minitra vitsy avy eo Dubrovnik dia ny nosy Lokrum, izay valan-javaboary voaaro. Raha hitsidika azy ianao dia mila mandeha sambo. Eto amin'ity toerana ity dia misy ny sisa tavela amin'ny tranon-tranon'i Benedictine iray izay noravan'ny horohoron-tany nahafaty tamin'ny 1667. Ho fanampin'izany, azonao atao ny misaintsaina ny fomba fijery mahavariana avy amin'ny Royal Fort ary mandany fotoana ao amin'ny Museum History History. Any amin'ny nosy Lokrum aza misy cove kely kely.
Ny biraon'ny fizahantany Dubrovnik dia namorona karatra antsoina hoe Dubrovnik Card izay ahafahantsika mitsidika ireo toerana manandanja indrindra eto an-tanàna, mitahiry vola be ho anay. Ho fanampin'ny fitateram-bahoaka (tena ilaina ho an'ireo izay tsy mijanona ao amin'ny tanàna taloha ao an-tanàna) ity karatra ity dia misy ny fitsidihana ny rindrina, ny Maritime Museum, ny Rector's Palace, ny Natural History Museum, ny Dubrovnik Art Gallery ary ny irery tombony amin'ny fidirana amin'ny Clock Tower, avy ao amin'ny lavarangana misy anao no ahitanao ny fahitana ny Placa, ny arabe malalaky ny tanàna.
Miankina amin'ny fomba maodely, ny karatra Dubrovnik dia samy manana ny vidiny. Ny karatra iray andro dia misy ny fitateram-bahoaka sy ny vidiny € 15,49 (117kn), ny karatra telo andro dia misy dia fitetezam-bolo folo sy ny vidiny € 21,44 (162kn) ary ny karatra fito andro dia misy dia fitateram-bahoaka roapolo ary € 26,21 (198kn) .
Ny torapasika Dubrovnik dia matetika amin'ny fasika maditra satria be mideza sy be vato ny faritra. Raha mikasa ny hitsidika ny tanànan'ny Kroaty ianao amin'ny fahavaratra, dia ampirisihinay hitsidika ny torapasika Gradska Plaza izay ao ambadiky ny vavahady Ploce eo akaikin'ny Lazaretto handro. Na izany aza, misy moron-dranomasina maro hafa amin'ny manodidina.
Ahoana no ahatongavana any Dubrovnik?
Misy sidina isan'andro izay mampifandray an'i Zagreb amin'i Dubrovnik ary koa tambajotram-pifandraisana be dia be izay mampifandray ny tanàna amin'ny ankamaroan'ny tanàna amin'ny vidiny mirary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Dubrovnik » Mahafantatra ny zoron'i Dubrovnik, ny voahangin'ny Adriatika
Fez, tanàna telo tsy mampino amin'ny iray